आज भानुभक्त आचार्यको जन्मजयन्ती - Nepal Insider
Home/समाचार/आज भानुभक्त आचार्यको जन्मजयन्ती
काठमाडौ । असार २९ अर्थात् नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मजयन्ती। नेपाल तथा नेपालीभाषी रहेका विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी आइतबार आचार्यको २०६औँ जन्मजयन्ती मनाइँँदै छ। आदिकवि आचार्यको जन्म तनहुँको चुँदी रम्घामा २०५ वर्षअघि अर्थात् वि.सं.१८७१ असार २९ गते भएको थियो। धनञ्जय आचार्य र धर्मावती देवीका छोरा भानुभक्तको शिक्षादीक्षा बाजे श्रीकृष्ण आचार्यको रेखदेखमा भएको थियो।
उनले भारतको वाराणसीमा पनि केही समय शिक्षा लिएका थिए। भानुभक्तले संस्कृत भाषामा रहेको रामायणलाई नेपाली भाषामा ढालेका थिए। रामायणलगायत प्रश्नोत्तर, भक्तमाला वधुशिक्षा, रामगीता लगायत उनका थुप्रै फुटकर रचना नेपालीभाषीमाझ लोकप्रिय छन्। जहाँ जुन प्रसंग आउँछ तत्काल कविता रच्न सक्ने क्षमता उनको थियो। उनको निधन १९२५ मा भएको थियो।
भक्तपुरमा घट्यो रहस्यमय डरलाग्दो घटना : घाँटी रे*टि-रे*टि एक वृद्धाको ह*त्या, सबै स्थानीय त्रसित (स्थलगत भिडियो रिपोर्ट)
क्रिकेट रङ्गशालाकाे बार भत्काउनेलाई तीन वर्ष जेल !
एसईई परीक्षा : के हो लेटर ग्रेडिङ ?, कुन ग्रेडको अर्थ के ?
छविबारे शिल्पाको झन् डरलाग्दो खुलाशा, रातभरी यस्तोसम्म गराउथे, अब कसैलाई नछोड्ने भन्दै शिल्पाको अडान